यस्तो महिलाले श्रीमानको घरमा राज गर्दछन् यी ५ राशिका महिला, मिल्ने गर्दछ सासु,ससुरा र पतिको अधिक माया ! – News Nepali Dainik
यस्तो महिलाले श्रीमानको घरमा राज गर्दछन् यी ५ राशिका महिला, मिल्ने गर्दछ सासु,ससुरा र पतिको अधिक माया !
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ३०, २०७७ समय: ११:५६:१९
सिंह राशिः यो राशी हुने महिला व्यवहारमा अत्याधिक जिद्दी मानिने र आफ्नो पतिलाई जिद्दीलेनै नियन्त्रणमा राख्न सक्षम हुने गर्छन । कर्मघरमा हुने हरेक कार्यमा आफ्नो संलग्नता कायम राख्न खप्पिस हुनाले आफ्नो कर्मघरमै राज नै गर्ने गर्छन् ।
भाग्यको मामिलामा वृष राशिका महिला सबैभन्दा अगाडि पर्दछन् किनकी यि राशिका महिला जहाँ जान्छन् त्यहाँको वातावरणलाई नै खुशी नै खुशी ले भर्ने काम गर्दछन् । जब कोही व्यक्तिसँग सम्बन्धमा जोडिन्छन् तब दिलबाट नै सम्बन्धमा बस्न चाहान्छन् । यी राशिहरु विवाह गरेर जुन घरमा जान्छन् त्यो घरको आउनेवाला करियर र व्यापार व्यवसायमा उन्नति देखिन थाल्छ । र यस्ता राशिले परिवारका सदस्यलाई एकजुट गरेर राख्ने गर्दछन् ।
Last Updated on: February 12th, 2021 at 11:56 am